Somaliland – Geelle Magazine
Somaliland: Tirada dadka u dhimanaya Covid19 oo korartey.
Maamulka Soomaaliland ayaa Maanta shaacisay kiisas horleh oo Cudurka Coronavirus ah oo laga helay deegaannadeeda iyo qofkii 9aad oo Cudurkaas ugu dhintay Soomaaliland tan iyo markii Cudurka laga helay. Guddiga wacyigelinta iyo ka hortagga COVID-19 u qaabilsan Soomaaliland ayaa sheegay […]
Muuse Biixi “khilaaf kasta Somalia iyo Somaliland waa in lagu dhameeyo wada hadal si looga fogaado colaad hor leh”
Maamulka Somaliland ayaa manta u dabaal dagay 18 may oo ah xiligi la aas aasay maamulka somaliland ee waqooyiga somaaliya. Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo jeediyay khubad dhinacyo badan taabanaysa ayaa ugu horayn ka sheekyay Tariikhdii aasaska maamulka somaliland […]
Somaliland oo diiwaan-gelisey dhimashadii labaad ee COVID 19
Jamhuuriyadda iskeed Madax-banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa Goordhow shaacisey in ay diiwaan-gelisey bukaano Cusub oo qaba Cudurka Covid 10, kuwaasi oo baaritaano kala duwan lagu sameeyey. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa waxa […]
Amar ay soo saartey Somaliland oo Maanta dhaqangalaya
caliahmed Posted On April 26, 2020
Khamiistii lasoo dhaafay ayaa Somaliland waxa ay ku dhawaaqday in si KMG ah deegaannadeeda uga joojisay jaadkii (qaadkii) uga iman jiray dalka Itoobiya. Maanta oo ku beegan 26-4-2020 ayaa la filayaa in deegaannada Somaliland uu ka dhaqangalo Amarkaas ku socday […]
Somaliland oo ku dhawaaqday Go’aamo ka dhan ah Covid 19
caliahmed Posted On April 25, 2020
Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Jamhuuriyadda Somaliland Sacad Cali Shire oo la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay go’aamo ay dawladu gaartay oo uu ku dhaliiyey xanuunka Coronavirus, isaga oo sheegay in ay si deg deg ah u hirgelinayaan. Waxaa uu sheegay in […]
Somaliland oo amar ku bixisay in la gubo qaadka wixii ka dambeeya maalinta Axadda
Jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa soo saartay tallaabooyin horleh oo looga hortaggayo faafitaanka cudurka coronavirus. Somaliland waxay shaaca ka qaaday in laga bilaabo Axadda la joojinaya qaadkii la keyni jiray guud ahaan deegaanada Maamulka Somaliland. Waxaa sidoo […]
WHO oo Dhaqaatiir caafimaad usoo dirtey Somaliland
Waxaa Magaalada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Somaliland soo gaaray tiro khabiiro Caafimaad ah oo ay soo dirtey Hay’adda Caafimadka Adduunka ee WHO. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa Warbaahinta u sheegay in khabiiradaan Caafimaad […]
Madaxwaynaha Somaliland oo ka hadalay dagaal ka dhacay Sanaag.
ahmedzaki Posted On April 19, 2020
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u direy labadda beelood ee ku diriraya deegaanka fadhi gaab ee gobolka Sanaag oo saaka dagaal ku dhexmaray laba beelood oo walaalo ah oo marar badan dagaalo dhexmaray. Sidoo kale, waxa uu […]
Hay’adda Amnsesty International oo Somaliland ugu baaqday in ay sii dayso Wariye Coldoon.
War saxaafadeed kasoo baxay Hay’adda Amnsesty International xafiiskeeda Nayroobi ayay ugu baaqday xukuumadda Somaliland inay xorriyaddiisa u celiso Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah suxufi muddo sannad ah ku xidhan Somalialnd. Sidoo kale waxa ay hay’addu ugu baaqday in dib u […]